Fifampiarahaban’ny andrimpanjakana : tsy nipoitra teny Iavoloha indray i Zafy sy Rajoelina | NewsMada
Fifampiarahaban’ny andrimpanjakana : tsy nipoitra teny Iavoloha indray i Zafy sy Rajoelina
Mbola mitoetra ny lonilony. Banga toy ny efa mahazatra ny sezan’ny filoha teo aloha, ny Pr Zafy sy ny filohan’ny Tetezamita, Rajoelina, omaly teny Iavoloha. Tsy mbola niaraka amin’ireo mpitondra teo aloha sy ny am-perinasa ireo filoha mianaka ireo hatramin’ny niakaran-dRajaonarimampianina teo amin’ny fitondrana tamin’ireo lanonana teny Iavoloha. Efa niatrika izany indroa kosa ny amiraly Ratsiraka raha teny hatrany Ravalomanana, telo taona nisesy. Tsy mazava ny anton’ny tsy nahatongavan’ny Pr Zafy. Mananika ny faha-90 taony rahateo ity “Rain’ny demokrasia” ity. Ho an’ny mpanorina Mapar kosa, efa nitsaitsaika lasa any Frantsa ny alarobia teo rehefa nankalaza ny fetin’ny Noely sy ny taom-baovao teto. Tsy nipoitra niaraka taminy koa ny depiote Mapar raha navitrika ny depoite Tim sasany.
Ankoatra azy ireo, niatrika ny lanonana ny amiraly Ratsiraka sy Ravalomanana mivady. Tsy tonga ny filohan’ny FLM, ny pastora Rakotonirina David, raha tazana teny ny filoha am-perinasan’ny FFKM, ny Mgr Razanakolona Odon (Ekar), ny anglikanina (EEM) ny Mgr Ranarivelo Samoela Jaona, ary ny FJKM, Andriamahazosoa Irako Ammi. Praiminisitra roa teo aloha ihany koa no hany namaly ny fanasana. Ny Jly Rabemananjara sy ny Pr Mangalaza. Maromaro ireo mpanao politika tonga teny an-toerana raha tsy hita teo aloha. Ohatra, Radavidson Andriamparany, Ralison Roger, Beza Seramila, Razaka Robert…
Tonga marobe ireo masoivoho, toy ny ambasadaoro frantsay, amerikanina, alemana, ny solontenan’i Vatikana sy ny avy amin’ny Vondrona eoropeanina…
Sambany nikabary ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré sy ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana noho izy ireo tsy mbola teo amin’ireo toerana ireo tamin’ny taon-dasa. Hentitra ny fitandroana ny filaminana. Nampiasaina ny alika mpitsongo dia. Nosavaina avokoa ireo niditra ny lapa. Tsy azo nentina ny finday teo am-piandohana, saingy niova hevitra ireo tompon’andraikitra ka namela izany indray avy eo. Nisahana ny sakafo ho an’ny rehetra ny hotely iray lehibe eny Antaninarenina. Anisan’ny nanafana ny lanonana i Samoela sy ny tariny. Toy ny mahazatra ity fitondrana ity, any amin’ny fiafaran’ny kabary ny fotoam-pivavahana.